Funny Archives - Lifestyle Myanmar
Home Category Funny
ဒီတခေါက်တော့ အသက်ရှင်ဖို့နဲ့ ရောဂါပိုးမကူးဖို့ထက် အိမ်သာသုံးစက္ကူမရှိတော့ရင်ဆိုပြီး တွေးပူနေကြတဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားက ဉာဏ်ကြီးရှင်တွေရဲ့ အကြံပြုချက်တွေကို Lifestyle Myanmar ပရိသတ်တွေစိတ်ညစ်ညူးပြေစေဖို့အတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ရေညှိပျော့ ဟိုးရှေးတုန်းကမြောက်အမေရိကလူမျိုးတွေ ကလေးအနှီး၊ ဂွမ်း၊ ဓမ္မတာလာခြင်း အစရှိတဲ့အရာတွေအတွက် ရေညှိပျော့ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်တဲ့။ အဲဒီတော့အိမ်သာသုံးစက္ကူမရှိရင် ရေညှိပျော့တွေကို အစားထိုးအသုံးပြုလို့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ငှက်ပျောခွံ ငှက်ပျောသီးတလုံးရှိရင် ဒီအခြေအနေကိုဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကြည့်ရတာတော့ ပုရွက်ဆိတ်ကိုက်မယ့်ကိန်းပါဘဲ..။ ကျောက်ခဲဝိုင်းဝိုင်းလေးတွေ မူရင်းစာမှာရေးထားတာတော့ ကျောက်ခဲဝိုင်းဝိုင်းလေးတွေက...
လူတွေဟာ တဖြည်းဖြည်းအသက်ကြီးလာတာကို ကြောက်ရွံ့သူတွေရှိနေကြသလို အသက်တွေကို ရပ်ထားလို့ရရင်ကောင်းမယ်လို့ တွေးနေသူတွေတောင် ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ကလည်း အသက်(၄၀)မှာ ဘဝစတယ်လို့ ယုံကြည်ကြသူတွေလည်း ရှိကြပြန်ပါတယ်။ မည်သို့ဆိုစေ အသက်ငယ်ရွယ်တာထက် အသက်ကြီးတာက အံ့ဩလောက်အောင်ပိုကောင်းကြောင်း သက်သေပြဖို့ ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက် (၁၅) ကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ၁။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ရူးကြောင်ကြောင်၊ ထူးထူးဆန်းဆန်းအမူအကျင့်တွေနဲ့ ဝါသနာတွေကို ဖုံးကွယ်ထားစရာမလိုတော့ဘူး😊 ၂။ ခုချိန်မှာ...
လကုန်လို့ လခထုတ်လာပေမယ့် ရသမျှလခတွေ ဘယ်ရောက်လို့ ရောက်မှန်းမသိတဲ့ အဖြစ်မျိုးတွေ ကြုံနေရပြီလား? လကုန်ခါနီးကို ရှင်သန်ဖို့ အထောက်အကူပြုနိုင်တဲ့ ချွေတာနည်းအနည်းငယ်ရှိပါတယ်။ လမကုန်သေးခင်မှာ အရမ်းစိုးရိမ်ပူပန်စရာမလိုဘဲ၊ သင့်ဝါသနာပါရာတွေကို စွန့်လွှတ်စရာမလိုပဲ ချွေတာသုံးနိုင်မယ့် နည်းစနစ်အချို့ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ (မှတ်ချက်- ဟာသအမြင်နဲ့သာ ဖတ်ပါ) ၁။ အိမ်မှာ နေ့လယ်စာ မစားခင် စူပါမားကတ်မှာ အခမဲ့နမူနာတွေ သွားမြည်းပါ ၂။ ကျန်နေတဲ့...
မူးလာရင်ဘွင်းခနဲ ပေါလာတဲ့ အရက်သမား ပုံစံ ၁၀ မျိုး (အမူးသမား၁၀မျိုး)
အရက်တွေဘီယာတွေ သောက်ပြီးသွားရင် ကိုယ့်ကိုယ်ဖြစ်တတ်တဲ့ အမူအကျင့်တွေကို သတိထားမိကြလား? တချို့ကျတော့မသောက်ခင်က အငြိမ် သောက်ပီးရင်တော့ သူ့လောက်ပျော်တတ်တာ စကားများတာ မရှိတော့ဘူး။ တချို့ကျတော့ သဘေ ာကောင်းစိတ်ကောင်းရှိတယ် မသောက်ခင်က မူးပီလည်းဆိုရော စူပါမန်းလိုလို ပါဝါရိန်းဂျားလိုလိုဖြစ်သွားတတ်ရော..ဒါကြောင့် မူးလာရင် လူတွေဖြစ်တတ်တဲ့ အမူအကျင့် ၁၀ မျိုးအကြောင်း ကိုရေးသားပေးလိုက်တာပါ။ တခုရှိတာက ကိုယ်က ဘယ်လိုပုံစံနဲ့မူးမူး ကျင့်ယူလို့ရပါတယ်နော်။ ဒါကိုမမေ့ပါနဲ့။ကဲ..အမူးသမား ၁၀မျိုးအကြောင်းကို...
တကယ်တော်တဲ့ ကလေးတွေဆိုတာ ဒီလိုမေးခွန်းတွေကို အေးဆေးပါတဲ့
ဖြတ်ထိုးဉာဏ်ကောင်းတယ်ဘဲပြောရမလား၊ သူများနဲ့မတူတဲ့ အတွေးအခေါ်ရှိတယ်လို့ဘဲဆိုရမလား။ ဘာဘဲပြောပြော ကလေးတွေအဖြေက လုံးဝကို ရှု့ထောင့်အသစ်တစ်ခုဖြစ်နေတာတော့ အမှန်ပါဘဲ။ သူတို့ဆရာတွေကတော့ တကယ်တော်တဲ့ကလေးတွေလို့ မှတ်ချက်ချရမလို စိတ်ဆိုးရမလိုဖြစ်နေမှာ။ သူတို့ဖြေထားတာလေးတွေက လူကြီးတွေဘယ်လိုမှ တွေးမိမှာမဟုတ်တာတွေလေ။ ကွာခြားချက်ကတော့ " 8 " ကခွေခွေလေး၊ "6" ကတော့ မဟုတ်ဘူးတဲ့ © EddieLomax / reddit ကော်ပီကူးခိုင်းတာလား...
ယောင်္ကျားလေးတွေအပေါ်မှာ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစေမယ့် စိတ်ဝင်စားမှုကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖော်ပြခြင်းကြောင့် အမျိုးသမီးတွေက သမိုင်းမှာ ပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်းခံကြရတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလိုပရောပရည်အနုပညာက မွေးဖွားလာခဲ့တယ်။ ဆန်းပြားတဲ့ ကိုယ်ဟန်အမူအရာ၊ မျက်နှာအမူအရာနှင့် ထိတွေ့မှုတွေရဲ့ အကူအညီနဲ့ အမျိုးသားတွေရဲ့ အာရုံကို ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ ချစ်စရာ coquetteက သူမရဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေထက် ကြီးမားတဲ့အားသာချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ စပယ်ရှယ်အကြည့် ကျွန်မတို့အဘွားတွေလိုမျိုး ဒီစပယ်ရှယ်အကြည့်တွေ ကြည့်ရှုတတ်ဖို့သင်ယူပါ။ ဒီလို...
Mr. Beanရဲ့ မျက်နှာ အစားထိုးထားသော ဟာသဂန္တ၀င်ပန်းချီကား (၂၀) ပုံ
အနုပညာရှင်တွေနှင့် ရုပ်ပြောင်ပန်းချီဆရာဖြစ်တဲ့ Rodney Pikeတို့ဟာ Mr. Beanရဲ့ မျက်နှာကို အသုံးပြုပြီးတော့ သမိုင်းက အနုပညာအပိုင်းအစတွေကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ သင့်အသက်ဘယ်လောက်ပဲရှိနေပါစေ။ Mr. Beanဟာ သင့်ဗိုက်ကျောတွေနာကျင်စေတဲ့ အထိရယ်မောပျော်ရွှင်စေတဲ့ ဇာတ်ကောင်တစ်ယောက်ပါ။ ဗြိတိသျှအနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ Rowan Atkinsonက ၎င်းကို ရယ်စရာနှင့် တီထွင်ဖန်တီးမှုနည်းဖြင့် အသုံးပြုဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ အနုပညာရှင်နှင့် ရုပ်ပြောင်ဆရာ Rodney Pikeတို့ဟာ သူ့ရဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာမှာ...
Matt Benedetto ရဲ့ Instagram အကောင့်မှာ တင်ထားတဲ့ သူရဲ့ တီထွင်မှုအကြမ်းစားကြီးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဗိုက်ခနခနဆာတတ်တဲ့ သူတွေအတွက်တဲ့ © unnecessaryinventions / Instagram မသိရင် အင်္ဂုလိမာလလိုဘာလိုလိုနဲ့။ ဗိုက်ခနခနဆာတတ်တဲ့သူတွေ ဆောင်ထားကြပါလား။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်း ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ရည်းစားကို စပရိုက်စ် လုပ်ပေးလို့ရတာပေါ့။ တစ်ခါထဲနဲ့ ချိုင်းနှစ်ဘက်စလုံး လိမ်းလို့ရတာပေါ့ © unnecessaryinventions /...
တချို့တွေက ရည်းစားနဲ့ပြတ်ချင်နေပြီ။ သူ့အပေါ်လည်းစိတ်ကုန်နေပြီ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ဘက်က စဖြတ်ဖို့လဲခက်နေတယ်ဆို ဒီနည်းလမ်းလေးတွေ သုံးကြည့်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ သူနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ဘယ်လိုလူဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်လိုအရာမျိုးမဆို အရေးမပါသလိုပြုမူဆက်ဆံပါ အသေးအဖွဲ့လေးကစပြီး ပြသနာရှာပါ။ အမြဲတမ်းအားနည်းချက်တွေ လှောင်ပြောင်ပါ။ သူမကြိုက်တဲ့ အရာတွေကြီးရွေးလုပ်ပါ။ အသုံးမကျလိုက်တာ၊ ဘာမှကို သုံးစားမရဘူးဆိုတဲ့စကားတွေကို တွင်တွင်ပြောပေးပါ။ တကယ်လို့ ကိုယ့်ရဲ့ရည်းစားက အရပ်ပုတဲ့ သူတွေဆိုလည်း ပုလို့၊ အရပ်ရှည်တဲ့သူတွေကိုလည်း ကလန်ကလားမလို့၊ ပိန်လို့၊...
တစ်ခါက ရွာတစ်ရွာမှာ အသားဟင်းငါးဟင်းလေးပါမှ ဆွမ်းမြိန်တဲ့ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးရှိသတဲ့။ တစ်နေ့ကျတော့ ဒကာတစ်ယောက်က နောက်နေ့မှာ ဆွမ်းစားကြွခဲ့ဖို့ လာဖိတ်သတဲ့။ အဲ့တော့ ဘုန်းကြီးကလည်း ဆက်ဆက်ကြွခဲ့မယ်လို့ မိန့်တော်မူလိုက်သတဲ့။ ပထမဒကာပြန်သွားပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ဒုတိယဒကာလာဖိတ်ပြန်သတဲ့။ နောက်နေ့ဆွမ်းစားကြွခဲ့ဖို့ပေါ့လေ။ ဘုန်းကြီးကလည်း လက်ခံလိုက်ပြန်သတဲ့။ ဒုတိယဒကာလည်း ပြန်သွားပြီးရော ဘုန်းကြီးက စဥ်းစားသတဲ့။ ပထမဒကာအိမ်ကို ကြွမယ်ဆိုရင်တော့ ချဥ်ပေါင်းဟင်းနဲ့ပဲ ဘုဥ်းပေးရမယ်။ နောက်ဒကာအိမ်မှာ ဘုဥ်းပေးရမယ်ဆိုရင်တော့...